အင်တာနက် SPEED ကို ပိုမိုတိုးမြင့် သုံးစွဲချင်သူများအတွက် ~ (IT) ကိုထိုက်
3:04 AM Internet နှင့် Website ဆိုသည်မှာ No comments
Internet speed နှေးနေလား ......? Internet speed ကိုနည်းလမ်း( ၅ ) မျိုးနှင့် အမြန်ဆန်ဆုံးဖြစ်အောက်ကူညီပေးချင်ပါတယ်။အချိန်ရမှဖတ်ပါ ။ ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ရင်လည်းကျော်သွားလိုက်ပါ။ကျွန်တော် ရေးသားပေးတဲ့(5) မျိုးထဲမှာ နည်းလမ်းတစ်ခုကို (20 % ) နှုန်း တိုးပါတယ် တစ်ဆင့် ချင်းကိုသေသေချာချာနားမလည်လို့ကျော်လုပ်ရင်လည်း ရပါတယ် ။မိမိတတ်နိုင်သလောက်လုပ်
အင်တာနက် speed မြှင့်ဖို့ ဆိုတာတော့ တကယ်တော့ မခက်ပါဘူး.....
DNS ဆိုတာဘာလဲ.........? Domain Name Server (or) DNS ဆိုတာ Web Address တွေ ကို ကွန်ပြူတာတွေ နားလည်တဲ့ IP Addressတွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲ ပေးတာပါ။ ဥပမာ သင်က website တစ်ခုခု ကိုဝင်ရောက်လိုက်တယ် ဆိုကြပါပါစို့ ။ DNS Server က IP Address အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကျမှ သင်က ၄င်း website ကို အသုံးပြုလို့ ရတာပါ။ သင် ၀က်ဆိုက်တစ်ခု ဖွင့်တိုင်း DNS Server က ကြားထဲကနေလ အလုပ် လုပ်ပေးနေ တာဖြစ်တဲ့ အတွက် အင်တာနက် အမြန်နှုန်းက DNS server ပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ လူအများစုက Internet Service Provider(ISP) တွေရဲ့ DNS ကို သုံးကြပါတယ်။ သင့် အင်တာနက် Speed ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လို့ သင့် ISPရဲ့ DNS ကို မသုံးဘဲ တစ်ခြား DNS(google dns,open dns etc:)တွေကို ပြောင်းလဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့( ဥပမာ - facebook စတာတွေမှာ ပိုမိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် အသုံးပြုလာနိုင်မှာပါ။
'Scripting' label အထိ ရောက်အောင်ရှာလိုက်ပါ။
'Active Scripting' မှာ disable လုပ်ပြီး ok လုပ်လိုက်ပါ။
Content settings ကိုနိုပ်ပြီး 'Privacy' ကိုနိုပ်ပါ။
- Windows XP ?
'Control Panel'က်ိုဖွင့် ပါ ။
'Classic view' enabledလုပ်ပေးပါ။
'System'မှာ Double click နိုပ်ပေးပါ။
'Automatic Updates' ကိုနိုပ်ပါ။
'Automatic Updates' ကိုနိုပ်ပြီး 'Keep my computer up to date.' OK ပေးလိုက်ပါ။
search box နေရာမှာ 'System and Security' ကိုနိုပ်ပြီး ရှာလိုက်ပါ။
'Windows Update' မှာ 'Turn automatic updating on or off' ဆိုတာကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
'Important updates' နေရာမှာ 'Never check for updates'ဆိုတာကိုရွေးပေးပါ။